स्वास्थ्य सेवामा गोपनीयताको महत्त्व
विचार स्वास्थ्य सेवामा गोपनीयताको महत्त्व आमोद प्याकुरेल
वैयक्तिक घेराको अवधारणा पाश्चात्य संस्कृतिमा भन्दा हाम्रोतिर अलि फरकै छ । यद्यपि, नेपालमा पनि सांस्कृतिक र पारिवारिक परिवेशसँगै निजी परिधिको व्याख्या बदलिँदै गएको छ । अहिले नै महामारीले व्यक्तिगत दूरीको महत्त्वको पाठ सिकाइरहेको छ । तर अझै हामीमा व्यवहारमा दूरी कायम गर्ने वा अरुको भौतिक वा अन्य व्यक्तिगत घेरालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास भने हुनसकेको छैन ।
हाम्रो समाजमा सामान्य बेलामा वा अहिलेको महामारीको बेलामा व्यक्तिगत घेरा कति र कसरी उलंघन हुन्छ भन्ने सार्वजनिक स्थानमा थाहा देखिन्छ । मान्छेको उमेर, तलब, वैवाहिक सम्बन्ध जस्ता सामान्य निजी जानकारी कसैलाई पनि सहजै सोध्नु हाम्रो समाजमा सामान्य हुन्छ ।
हाम्रो सामाजिक बनोटले पो अरुको भौतिक घेराको सम्मान गर्नमात्र होइन एकअर्काको व्यक्तिगत मामिलामा पनि चासोको सीमा तोक्न नसकेको हो कि ? हामी केही वर्षअगाडि सम्म संयुक्त परिवारमा रहन्थ्यौँ । अनि भौतिक र पारिवारिक संरचनाका कारणले व्यक्तिगत घेराको सबाल नै उठ्दैन थियो । आवश्यक सहकार्यको क्रममा परिधि अतिक्रमण हुनु बाध्यता थियो भने त्यसमा मद्दत र आत्मीयताको भावना गाँसिएको पनि हुन्थ्यो । तर विकास र आधुनिकीकरणसँगै समाजको बनोट र परिधि भिन्न भएको छ । भूमण्डलीकरणले त अब सामाजिक मूल्य मान्यता र समाजलाई परिचालन गर्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक नीति नियम पनि एकअर्काबाट अतिक्रमित भइसकेको छ ।
स्वास्थ सेवा वैयक्तिक घेरा र गोपनीयताको बढी नै महत्तव भएको क्षेत्र हो । स्वास्थ क्षेत्रमा गोपनीयता, विश्वास र व्यक्तिगत सुरक्षालाई स्थानीय मूल्यमान्यताका साथै चिकित्सा अभ्यासमा अवलम्बन भइआएको विश्वव्यापी नैतिकता र आचरणको नीयमले पनि बाँधेको हुन्छ । आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रको सबै विधामा गोपनीयताको भूमिका त मुख्य नै हो भने साथै स्वास्थ क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान, तथ्यांक व्यवस्थापन, जानकारी संप्रेषणजस्ता कार्यमा पनि गोपनीयताको भूमिका महत्तवपूर्ण हुन्छ । सामाजिक मान्यता, प्रविधि, कानुन र ‘ जैविक नैतिकता’ (बायोएथिक्स)को जटिलतामा पनि जेलिएको छ । साथै समाजमा व्यापारिक र स्वास्थ सेवा नियामक निकायलाई कुन हदसम्म व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउने विषयमा पनि नैतिकतालाई केन्द्रमा राखेर बहस चलिरहेको छ ।
गोपनीयतामा अडेको सेवा : चिकित्सा
स्वास्थमा गोपनीयतालाई बिरामीको उपचारक्रमको गोप्यता मात्र नभई त्यसक्रममा हूने व्यक्तिगत जानकारीको विश्वसनीयताका साथै अन्य व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा स्वास्थ सेवा भनेको बिरामी र डाक्टरबीचको सम्पर्कमात्र जस्तो लागे पनि उपचार क्रममा धेरै दृश्य अदृश्य व्यक्ति र इकाइको संलग्नता हुन्छ । आधुनिकीकरण हुँदैगएको उपचार पद्धतिमा आवश्यक सबै सेवा एकै छानामुनि उपलब्ध हुनेहुँँदा डाक्टरहरूले उपचार क्रममा अन्य विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गर्नुका साथै रोग निदानका लागि प्याथोलोजी र रेिडओलजी परीक्षण सामान्य आवश्यकता भइसक्यो । यसरी एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा जानकारी सञ्चार हुने क्रममा बिरामीको नितांत व्यक्तिगत सूचना पूर्णतवरले सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यस्तै बिरामीको रेकर्ड नेटवर्कमा वा अन्य भौतिक तरिकाले राखिए पनि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचबाट सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
बिरामीले उपचारका क्रममा आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत अवस्था पराइ सामु खुलस्त बताउनु भनेको उसले चिकित्सक र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि विश्वास गर्नु हो । यस्तो विश्वास सजिलै रातारात पलाएको होइन । यो स्वास्थकर्मीहरूबाट वर्षौंदेखि नागरिकलाई आधुनिक स्वास्थोपचार अपनाउन सचेत गराउने क्रममा सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत मूल्यमान्यतासँग सम्झौता गराउँदै भएको निरन्तर प्रयासपछि पलाएको विश्वास हो ।
नेपालमा आधुनिक स्वास्थ सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । स्वास्थ चेतनाकोे कमीले कतिपय ठाउँमा अझै धामी, झाँक्री, फुकफाकलगायत परम्परागत स्वास्थ सेवामै बढी विश्वास गरिन्छ । कतिपय त सुविधा र सुलभता हेरेर आधुनिक र परम्परागत खुवै चिकित्सा विधिमा भर पर्ने गर्छन् । तसर्थ, यस्तो सवेदनशील अवस्थामा त झन् स्वास्थ पद्धतिको कुनै अंशमा पनि विश्वास गुम्ने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
हाम्रो समाजमा भने स्वास्थ सचेतहरूलाई नै पनि गोपनीयता र विश्वसनीयतासम्बन्धी विषयमा ज्ञानको कमीले गर्दा आफ्नो हक हनन भएको पनि ज्ञान हुँदैन । स्वास्थमा कतिपय जटिलता बिरामीलाई बताउन कठिन हुन्छ । चिकित्सकहरूको आफ्नै अनुसन्धानले देखाएको छ कतिपय बिरामीले सही स्वास्थ स्थिति लुकाउनाले उपचारविहीन भएर अनावश्यक नकारात्मक असरले रोग जटिल बनाइ रहेको हुन्छन् भने अन्य कतिपय रोगलाई समाजले कलंकको रूपमा हर्ने गर्दा बिरामीहरूले उपचारविना दुःख भोगिरहेका छन् । मानसिक रोगलाई आज पनि नेपाललगायत विश्वको कतिपय देशमा समाजको नजरबाट लुकाइन्छ । असी र नब्बेको दशकमा एड्सलाई कलंकका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले केही हदमा कोरोनाका बिरामीले पनि यस्तै लाञ्छना सहिरहेका छन् ।
सुरुसुरुमा कोरोनाको संक्रमण फैलन थालेका बेला विभिन्न समुदायमा संक्रमितहरू लाञ्छित भएर घरबाटै भाग्नुपर्ने स्थिति समेत भयो भने कतिपय स्वास्थकर्मीलाई समेत दव्र्यवहार गरियो । सरकारलाई संक्रमितको हुलिया र ठेगाना खुलाउन दबाब दिइयो । फलस्वरूप कति मान्छे क्वारेन्टिनबाट परीक्षण नै नगरी भागेर आआफ्नो समुदायमा गए । फलस्वरूप, धेरै ठाउँमा संक्रमण झन् फैलियो । यसबाट पनि स्वास्थमा गोपनीयता र विश्वनीयताको महत्त्वपूर्ण भूमिका पुष्टि हुन्छ ।
स्वास्थको सचेतना निकै बढे पनि अझै अस्वस्थतालाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ । सेवामा पहुँचको कठिनाइकासाथै रोगव्याधिप्रति समाजको नकारात्मक धारणाका कारण दीर्घरोगीहरू चिकित्सकको निर्देशनको पालन गर्न चुक्ने यथार्थ विश्वव्यापी तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विश्वास जितेर उपचारलाई निरन्तरता दिँदा चकित्सकको हैसियतले मात्र नभएर मनोसामाजिक परामर्शदाताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । तसर्थ विश्वसनीयता चिकित्साको अपरिहार्य आधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकामा १९३० को दशकमा सुरू भएर २ दशकभन्दा बढी सरकारकै स्वास्थ निकायको अगुवाइमा अफ्रिकी मूलका अश्वेत जातिलाई लिएर भएको एउटा भिरिंगी रोगसम्बन्धी अनुसन्धान ‘तस्किगी इक्स्पेरिमेंट’ स्वास्थ क्षेत्रमा अनैतिकता र विश्वसनीयताको हननको उदारहण हो । यसको कारण स्वास्थ अनुसन्धान पद्धतिको व्यापक सुधार गरियो भने अफ्रिकी अमेरिकी समुदायको भने स्वास्थ सेवाप्रति शंकाको भावना बसिरह्यो । अहिले पनि कोरोनाको खोप लिने कि नलिने वा विश्वास भए नभएको सर्वेक्षणमा अफ्रिकी अमेरिकीको खोपप्रति विश्वास अरु समुदायभन्दा धेरै कम देखाएको छ ।
आधुनिक चिकित्साशास्त्रको पाठ्यक्रममा आधारभूत पाठमा बिरामीको गोपनीयता पनि रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि चिकित्सक गोपनीयताबारे अनभिज्ञ हुनु अनैतिक हुन्छ । तर, हाम्रो स्वास्थ सेवा प्रक्रियामा भने नियमितरूपमा नै यो आधारभूत सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको पाइन्छ । सेवा केन्द्रहरूले उपयुक्त संरचनात्मक मापदण्ड नअपनाउनाले बिरामीको गोपनीयता भंग भइरहेको छ । काठमाडौंकै कतिपय अस्पतालमा डाक्टरले परामर्श दिइरहँदा अरु बिरामी कपडाको पर्दा पछाडि नै हुन्छन् । त्यहाँबाट भित्रको सम्पूर्ण कुरा सुन्न सकिन्छ । अनि बिरामीको गोपनीयता कसरी कायम हुन्छ ? त्यस्तै प्याथोलोजी ल्याबले अरुले सुन्न सक्ने दूरीमा जाँचको किसिम, रिजल्ट त नियमित वितरण गरिरहेका हुन्छन् । औषधि पसलमा पनि गोपनीयताको नीयम सधैँ उल्लंघन भइरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना अनुपयुक्त भएको कारणले अथवा व्यवस्थापनको कमजोरीले यस्तो हुन्छ भने कतिपय स्थितिमा गोपनीयताको उल्लंघन सेवामा कार्यरत स्वस्थकर्मीहरूबाट नै भइरहेको छ । सबै उल्लंघन बदनियतले नै नभए पनि ती अनुचित हुन् र सुधार आवश्यक छ ।
केही समयअगाडि एकजना शल्यचिकित्सकले आफ्नो बिरामीसँग सेल्फी खिचेर सामाजिक संजालमा राखेका रहेछन् । यो पक्कै बिरामीकै सहमतिमा खिचिएको हो र सायद डाक्टरले सोधेरै राखे होलान् । तर, बिरामी पनि दुनियाँकै कुख्यात अपराधी परेछन् । मनोवैज्ञानिकहरू जघन्य अपराधीहरू आफ्नो कर्तुतबाट ‘सेलेब्रिटी’ बन्न खोज्छन् भन्छन् । तर, चिकित्सकले फोटो राख्ने इच्छा गर्नु र अपराधीले खोजेको ध्यानाकर्षणको चाहना मिल्न गए पनि चिकित्सा विज्ञानको नैतिकताको सीमा भने उल्लंघन भयो ।
आर्का एक जना चिकित्सकले आफूकहाँ आएका धामी काम गर्ने बिरामीसँग सेल्फी खिचेर ट्विटरमा व्यंग्य गर्दै ‘धामीलाई उपचार गर्ने हामी’ क्याप्सन लेखेर राखेछन् । ती धामीले ट्विटर हेरेर आफू नांगिएको कहिल्यै देख्दैनन् होला तर बेहोस बनाएर शल्यक्रिया गर्न बेडमा सुताएको बिरामीले पनि थाहा पाउँदैनन् होला । तर, यही संवेदनशीलतालाई ध्यान राख्दै चिकित्साशास्त्रमा कतिपय आचरणलाई नैतिकताले नियन्त्रण गर्छ ।
सम्बन्धित डाक्टरसँग ट्विटरमा बिरामीको व्यक्तिगत सीमा र गोपनीयताको उल्लंघनबारे राखिएको जिज्ञासामा उनले बिरामीको सहमतिमै राखेको जनाउनुभयो तर व्यंग्यात्मक शैलीमा ‘औँठा छाप’ चाहिँ नलिएको भन्दै कटाक्ष गरे । एक समाजशास्त्रीको हैसियतले मलाई चाहिँ घोच्यो । यहाँ उल्लेख गरेको उदारहणहरूमा मात्र होइन अरु पनि यस्तै ‘घटना’मा शक्तिहीनले समाजका शक्तिशालीलाई अन्जानमै सहमति दिइरहेका हुन्छन् ।
पहिलो, विश्वको सबै समाजमा चिकित्सकको पेसागत ज्ञान र सीपको सम्मानस्वरूप सधैँ उच्च स्थानमा राखिन्छ । अनि चिकित्साशास्त्रलाई समाजको शारीरिक र मानसिक स्वास्थको हित र संरक्षणको जिम्मा सुम्पिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा उनीहरु सामाजिक नियमनका माध्यम हुन् । अनि आफ्नो ‘जीवन रक्षक’को व्यक्तिगत अनुरोध चाहे धामी होस् वा प्रधानमन्त्री अहिले पनि नेपालमा नमान्न मुस्किल नै हुन्छ । डाक्टरको कुरामा मौखिक सहमति जनाउँदा बिरामीको मनमा डाक्टरले बिरामीको हितमा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने विश्वास हुन्छ । त्यसैले डाक्टरले बिरामीको हितको स्वविवेकले रक्षा गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, स्वास्थ सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिरामीको सहमति मौखिकभन्दा लिखित नै हुनुपर्छ र त्यो सहमतिको परिधि पनि तोकिएको हुनुपर्छ । सहमति लिएकै भए पनि आफनो सामाजिक संजालमा राखेर हस्सीको पात्र बनाउँदा डाक्टरले बिरामीको विश्वास तोडे ।
तेस्रो, ‘आंैठा छाप’सँग जोडेर बिरामीको आर्थिक सामाजिक स्थितिको उपहास गर्नुका साथै डाक्टरले त्यो बिरामीको सामाजिक आर्थिक अवस्था पनि खुलासा गरिदिए । यो विश्वसनीयता भंगको उदारहण हो । यो डाक्टरको हैसियतले मात्र होइन कानुनीरूपमा पनि उचित होइन ।
चौथो, एक जना धामी डाक्टरकहाँ उपचारको लागि आए । तर, मानव विज्ञानको अध्ययनले देखाएको छ आधुनिक र परम्परागत स्वास्थ सेवा एकसाथ चलिरहेको आफनो सामाजिक संजालमा राखेर उनलाई हस्सीको पात्र बनाई धामीझाँक्रीको पनि स्वास्थ सेवा दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको पुष्टि गरेको छ । बरु यस्तो मौकामा धामीलाई उचित जानकारी दिएर आफ्नो समुदायलाई स्वास्थ चेतना वृद्धि गर्ने उपाय हुन्थ्यो ।
अन्त्यमा, गोपनीयता र विश्वसनीयता रक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गर्न नहुने गरी कडा कानुन बनाएमा खण्डमा अनधिकृत व्यक्तिहरूद्वारा कुनै किसिमको दबाब वा कार्यसीमा अतिक्रमण रोक्नेछ । साथै कर्मचारीहरूको सुरक्षा पनि गर्छ । बारम्बार उपचारक्रममा भएको घटनाका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थकर्मीहरूप्रति विरोध वा अभद्र व्यवहार वैयक्तिक मर्यादाको उल्लंघन नगर्ने नीयम पूर्णरूपमा पालन नगर्दा नै उत्पन्न हुने गरेको हो ।
यो लेख स्वास्थ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत सुधारमध्ये एउटामा ध्यानाकर्षण गर्ने जमर्को हो । दुर्भाग्यवश, यस्ता उल्लंघनका उदाहरण नेपाली स्वास्थ क्षेत्रमा जाताततै छन् । तर, गोपनीयता र विश्वसनीयताको उल्लंघनमा चिकित्सक, अन्य स्वास्थकर्मी वा सेवा केन्द्रकोमात्र आलोचना गर्न पनि मिल्दैन । यसमा सरकारले उचित मापदण्ड, अनुगमन, उचित नियम कानुन निर्माण र आवश्यक कारबाहीको पहल गर्नुपर्छ । विगत दुईतीन दशकमा स्वास्थ क्षेत्रमा सेवाको दायरा बढाउने हतारमा बिरामीको रक्षाका लागि नियम, नीति, कानुन, निरीक्षणको व्यवस्थाले चाहिँ उचित मञ्च पाएन । सबैको ध्यान आधुनिक प्रविधि, पश्चिमी ढाँचाको सेवामा गयो तर पश्चिमी मुलुकको स्वास्थ सेवामा हुने बिरामीको हकहितको रक्षा, चिकित्सकदेखि सेवा केन्द्रको जिम्मेवारी, अनि सेवाग्रहीको भूमिका भने न सिकाइयो न अवलम्बन गरियो । कानुन र नैतिकतासम्मत स्तरीय स्वास्थ सेवाका लागि बिरामीको हितमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भने पैसा कमाउने होडमा उपेक्षित भयो ।